Chikoro Chechikoro cheGerman Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Mashoko echiGerman » Chikoro cheGermany Chikoro
Muchidzidzo chino, tichaona zvinhu zvakadai sezvinhu zvekuGermany zvidzidzo, zvinhu zveGermany zvidzidzo, uye tichadzidza mazita echiGerman zvezvinhu uye zvidzidzo zvekudzidzisa zvinoshandiswa muchikoro, mukirasi, uye zvidzidzo. Mifananidzo yakagadzirwa nesu. Mumifananidzo iri pasi apa, zvinhu zvekuGermany zvidzidzo uye zvinhu zvekirasi zvinopiwa pamwe chete nezvose zvinyorwa uye zvakawanda. Ongorora zvakanyatsonaka. Pasi pezviratidzwa, pane urongwa hwezvidzidzo zvekuGerman zvinyorwa, saka usakanganwa kutarisa rondedzero yedu.
Chikoro cheGermany uye Chikoro Chezvinhu Zvakagadzirwa neMabhuku uye Zvikamu
Tinokudai iwe kubudirira mudzidzo yako yeGermany.
KUFUNGA IZVI: Zvakawanda Zvikamu zveGerman Nouns (Plural Subject)
Muchidzidzo chino, takapa mutsamba mafupi emashandisi anoshandiswa muchikoro, anoshandiswa mukirasi, inodiwa mune zvidzidzo.
TAGS: chikoro chechikoro chechikoro, chikoro chechikoro chechikoro, chikoro chechikoro chechikoro, German class items, chikoro zvinhu zvechi German, chikoro zvinhu zvechi German
MUVANZI KUCHOKURUKURWA - 20 KUBVUNZA
Dyna ndiye akati:
I Mavis akati:
03 February 2019, 03: 07
Sawa mudzidzisi, ndinoda kukubvunza mubvunzo ...
Ndakapedza kudzidza kubva kuchikoro chekudzidzisa "web programming fort in the field of fortbildung kana Weiterbildung Ndinoda kuita nedhipatimendi rangu muchikwata 70 uyewo osym test ndine chigwaro muyunivhesiti Ndine rekodhi ... chii chandinofanira kuita kuratidza kuratidza nzira